Bata ID kumhanyisa kuenzanisa pakati pe iPhone 5s, 6 uye 6s [vhidhiyo] | IPhone nhau
Bata ID kumhanyisa kuenzanisa pakati pe iPhone 5s, 6 uye 6s [vhidhiyo]
Iyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus, izvo zvave zvichitengeswa kubvira Chishanu chapfuura, Gunyana 25 (uye ichave iri muSpain kubva muna Gumiguru 9), inosvika iine zvinhu zvitsva zvinoverengeka, pakati payo iyo skrini ine kuzivikanwa inomira pachena. Kumanikidza pamatanho matatu inozivikanwa se3D Kubata, iko kuvandudzwa kwemaviri makamera, iyo 2GB ye RAM kana yechipiri chizvarwa Kubata ID. Vanhu vakambozviedza vanoti zvinongoitika ipapo ipapo, chimwe chinhu icho kubva pakuona kwangu chisina kukosha kwazvo. Chinhu chakanakisa nezvechizvarwa chechipiri Kubata ID ndechekuti icharamba yakachengeteka kupfuura yapfuura. Kana isu tisingakwanise kuyedza iyo iPhone 6s pachedu, zviri nani kutarisa vhidhiyo iyo Enzanisa iyo Kubata ID yeiyo iPhone 6s neiyo yeiyo iPhone 6 uye iPhone 5s.
Sezvauri kuona, misiyano iri "shoma", ona makotesheni, uye kunyangwe iyo ID ID yeiyo iPhone 5s inokundikana panguva mbiri, chimwe chinhu chisati chaitika kwandiri kubvira iOS 7.0, sezvo iri mune yepamusoro shanduro yeiyo iOS kugadzirisa. mune izvi zvakasanganiswa. Ngazvive sezvazviri, zvinokwanisika kuti iko kurongeka kweiyo Yechipiri chizvarwa Kubata ID zvakare zvirinani kuona mafingerprint kunyangwe paine kanyorova, chimwe chinhu chisati chasimbiswa.
Kana vhidhiyo yapfuura isina kukwana iwe uye, seni, uri mumwe wevaya vanokiyinura iPhone yako nekudzvanya bhatani rekutanga, vhidhiyo inotevera haizosiya nzvimbo yekukahadzika.
Vhocha. Ichokwadi kuti muvhidhiyo yechipiri iyi mune hove diki, nekuti iyo iPhone haina mifananidzo inoshanda asi, kunyangwe zvakadaro, kumhanyisa kwekumhanya kunoshamisa. Kunyangwe, sezvandinodzokorora, chakanyanya kukosha hakusi kumhanya kwacho, asi zvakare kunowedzera kunyangwe chengetedzo kana zvichikwanisika kune chengetedzo yatakatowana nemhando dzekare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 5s » Bata ID kumhanyisa kuenzanisa pakati pe iPhone 5s, 6 uye 6s [vhidhiyo]
Kaviri chinyorwa chinoratidza kuti iyo nyowani touchID yakachengeteka uye ini ndasara nechido chekuziva chikonzero
Pindura kuna alfonsico
Mhoro, Alfonsico. Izvo zvakaringana, hapana chimwezve.
Sezvo ini ndine iOS 9 pane yangu mashanu iye anokiyinura ini sekunge ichibuda mumhino dzake. Hafu yenguva yandinovhura siri, imwe yacho inotadza ... uye inononoka sooo. OMG handisi kufara nezvinoitika
Pindura kuti lestatminiyo
Yekukurumidza kuenzanisa pakati peese maPhones [VIDEO]
Iwo maPhones matsva anogara kusvika paawa rimwe pasi pemvura!